July 2013 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
8:11:00 AM software No comments
Format Factory ဟာ converter တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့
You can convert either single files or entire folders from one format to another. Presets for portable devices make it easy to create audio and video files that can play on your Android phone or tablet, iPhone, iPad, iPod or Blackberry. Format Factory lets you rip your favorite DVDs and Music CDs to createacopy of your films and songs on your local hard disk or any portable storage drive. If your media files are corrupted, Format Factory can help to repair them. While converting pictures, Format Factory allows rotation and zoom as well as adding of tags and watermarks. The program also comes with an AV Mux tool.
အသုံးပြုပုံကတော့ (ဥပမာ) ဒေါင်းထားတဲ့ m4 သီချင်းကို mp3 ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် Audio ကို clickလိုက်ပါ..။
အဲလိုပေါ်လာရင် Add file ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်ပြောင်ချင်တဲ့ ဖိုင်ရှိရာကို သွားပြီး ရွေးပေလိုက်ယုံပါပဲ..ရွေးပြီးရင်
ဒီလိုပေါ်လာရင် အပေါ်က မြှားပြထားတဲ့ start ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်က click to start ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် နှိပ်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ..။ Format Factory 3.1.1 ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
CCleaner Professional and Business Edition 4.04
6:51:00 AM software No comments
CCleaner Professional and Business Edition 4.04. ပါ..။ update လေးတွေ့တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။အထဲမှာ CCleaner 4.xx Business Activator နဲ့ CCleaner 4.xx Professiona Activator နှစ်မျိုးပါတယ်..။
သူကိုဒေါင်းပြီးရင် ccsetup404.exe ဖိုင်လေးကို ပုံမှန်အတိုင်ပဲ install လုပ်လိုက်ပါ..။
ပြီးသွားရင် သူကို ပိတ်လိုက်ပါ..။
ပြီးရင်Business Activator နဲ့ Professional Activator နှစ်မျိုးထဲ ကနှစ်သက်တဲ့ ဟာတခုကို ရွေးပြီးclick လိုက်ပါ..။activate လုပ်နည်းကို ဒီမှာ ကြည်ပါ...။
CCleaner Professional and Business Edition 4.04 ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
4:42:00 AM software No comments
6.17 Build6ပါ.. ...Patch ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူ့ကိုသွင်းပြီးသွားရင် ထုံးစံအတိုင်းကီးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်.။ ပြသနာမရှိပါဘူး သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။
Internet Download Manager 6.17 Build6ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
8:04:00 AM software No comments
Advanced SystemCare7Beta 1.0 ပါ..။အသစ်မှာ ဘာတွေပါလည်း ဆိုတော့
mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ် လိုချင်ရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
6:30:00 AM software No comments
windows 8 gadget pack latest
5:51:00 PM software No comments
windows 8 အတွက် gadget စုံလင်တာလေးတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။
ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို နှစ်သက်တဲ့ သူတွေအကြိုက်တွေ့မယ် ထင်ပါတယ်..။
mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်.လိုချင်ရင်.ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
Office 2013 activate ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်..။
9:37:00 AM နည်းပညာ 1 comment
microsoft office 2013 ကို activate လုပ်ဖို့အတွက် office MTKV ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
ဒေါင်းလို့ရတဲ့ ဖိုင်ကို double click ပေးပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ..။
ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း မြားပြထားတဲ့ နေရာကို click လိုက်ပါ..။
Activation ကို click လိုက်ပါ...။
Install ကို နှိပ်လိုက်ပါ..။
Activate ကို Click တချက်ပေးလိုက်ပါ..။
check ကိုတချက်လောက် click ပြီး ကြည့်လိုက်ပါ..။အဆင်ပြေသွားတာတွေ့ရပါမယ်..။
ဒါဆိုရင် microsoft office 2013 activate ဖြစ်သွားပါပြီ..။
ထွက်လည်းထွက်နိုင်လွန်းတဲ့ IDM ဗျာ..။မနေ့တနေ့ကပဲ ထွက်ထားတယ်အခု
6.17 Build5တဲ့ ...Patch ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူ့ကိုသွင်းပြီးသွားရင် ထုံးစံအတိုင်းကီးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်.။ ပြသနာမရှိပါဘူး သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။
Internet Download Manager 6.17 Build5ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
့How to 20% Boost internet speed
6:19:00 AM နည်းပညာ No comments
ဘာဆော့ဝဲ အကူညီမှ မပါပဲ Internet connection speed ကို 20% တိုးမြင့်ပြီး သုံးကြည့်ရအောင်..။
အရင်ဆုံး windows +R ကိုနှိပ်ပြီး Run box ကိုခေါ်လိုက်ပါ..။
အထဲမှာ gpedit.msc ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ..။
Computer Configuration ကို double click ပေးလိုက်ပါ..။
Administrative Templates ကို double click ပေးလိုက်ပါ..။
Network ကို double click ပေးလိုက်ပါ..။
QoS Packet Scheduler ကို double click ပေးလိုက်ပါ..။
Limit reservable bandwidth ကို double click ပေးလိုက်ပါ..။
ဒီအဆင့်မှာ နံပါတ်(၁) အ၀ါရောင်နဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်း Elabled ကိုရွေးပေးပါ..။နံပါတ်(၂) Options အောက်က Bandwidth limit% မှာ လက်ရှိ 80 ကနေ(0) သုံည ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး..
နောက်ဆုံးအဆင့် Apply > ok လုပ်လိုက်ရင် ပြီးပါပြီ..။
7:50:00 AM နည်းပညာ No comments
8:26:00 PM software No comments
17 ရက်နေ့ကထွက်တဲ့ Download Internet Download Manager 6.17 Build3ပါ..။
Patch ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူ့ကိုသွင်းပြီးသွားရင် ထုံးစံအတိုင်းကီးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်.။ ပြသနာမရှိပါဘူး သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။
ပြီရင် patch ဖိုင်လေးကို run လိုက်ပါ..။ patch အသုံးပြုပုံကို ဒီမှာ
ကြည့်လိုက်ပါ..။ Download Internet Download Manager 6.17 Build3ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
8:36:00 AM software No comments
ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ပျော်စရာလေးတွေ ဖန်တီးဖို့ပါ..။ ဒီဇိုင်းတွေ အတော်စုံစုံနဲ့ ကိုယ့်ဓါတ်ပုံတွေကို အလန်းလေးတွေ ဖန်တီးချင်ရင် ဒီfunnyphotomaker လေးက အကောင်းဆုံး ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်..။အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူရိုးရှင်းသလို စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင်လည်း လှပသစ်ဆန်း မှုလေးတွေ တွေ့ရမှာပါ..။
CCleaner Professional and Business Edition 4.03.4151
4:29:00 AM software No comments
CCleaner Professional and Business Edition 4.03.4151 ပါ..။ညီလေးတယောက်က မေးထားတာရှိတာနဲ့ update လေးတွေ့တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။အထဲမှာ CCleaner 3.xx Business Activator နဲ့ CCleaner 3.xx Professiona Activator နှစ်မျိုးပါတယ်..။
သူကိုဒေါင်းပြီးရင် ccsetup400.exe ဖိုင်လေးကို ပုံမှန်အတိုင်ပဲ install လုပ်လိုက်ပါ..။
ပြီးရင်Business Activator နဲ့ Professional Activator နှစ်မျိုးထဲ ကနှစ်သက်တဲ့ ဟာတခုကို ရွေးပြီးclick လိုက်ပါ..။
အခုလိုပေါ်လာရင် Next ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..။
ဒီအဆင့်ရောက်ရင်လည်း Next ကိုပဲရွေးပေးယုံပါပဲ..။
ဒီနေရာရောက်ရင် start ကိုရွေးယုံပါပဲ..။
Exit ကိုနှိပ်ပြီး ထွက်လိုက်ယုံပါပဲ..။
အခုဆိုရင် ကျွန်ပျူတာမှာ CCleaner Business Edition 4.03.4151 လေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်။လိုချင်ရင် ဒီမှာ
WinTools v13.0.1 Premium
7:11:00 AM software No comments
WinTools v13.0.1 Premium လေးပါ..။ ကွန်ပျူတာကို သွက်လက်ပေါ့ပါးစေဖို့နဲ့ ..။
စက်ထဲမှာကျနော်တို့ရှာလို့မရနိုင်တဲ့ မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေကို
windows startup and internet connection ကိုလည်း မြန်ဆန်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်..။
premium version လေးဖြစ်အောင် License key လေးထည့်ပေးထားပါတယ်..။
key ထည့်တဲ့အချိန်မှာ internet connection လေးကိုခဏလောက်ပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်..။
8:33:00 AM software No comments
nero _Platinum-12.5.01900 လေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။ကျနော်သုံးလာခဲ့သမျှ nero version တွေထဲမှာ ဒီကောင်းလေးကို အနှစ်သက်ဆုံးလို့ သတ်မှတ်ရတော့မယ်ထင်တယ်..။
ပုံမှာတွေတဲ့အတိုင်းပါပဲ..။windows 8 နဲ့ လည်းလိုက်ဖက်ညီလှတယ်..။
-Nero Blue-ray Player.
nero တခုတည်းကိုပဲ ကျင်ကျင်လည်လည် အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင် photos and videos
တွေ တည်ဖြတ်ပြုပြင်တတ်တဲ့ သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
ကျနော် mediafire ကနေ ၂ပိုင်းခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်..။ ဒေါင်းပြီးရင် အပိုင်းတစ်ကို Right click ပေးပြီး Extract here လုပ်ပြီး ဖိုင်ကိုဖြည်လိုက်ပါ..။
install လုပ်ဖို့ nero.exe ဖိုင်လေးရလာပါလိမ့်မယ်..။
အပိုင်း ၁ ကို ဒီမှာ ယူပါ..။
အပိုင်း ၂ ကို ဒီမှာ ယူပါ..။
fullversion ဖြစ်ဖို့ crack ကိုသုံးရမှာပါ..။
crack file သုံးတဲ့ အချိန်မှာ antivirus ကိုခဏပိတ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့..။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း crack file ထဲက patch လေးကို click လိုက်ရင် ရပါပြီ..။
crack ဖိုင်ကို ဒီမှာ ယူပါ..။
7:48:00 AM software No comments
၀ါသနာတူသူ အလှအပမြတ်နိုးသူတွေ အသုံးပြုဖို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တာပါ..။
mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
Advanced SystemCare 6.3.0.269. Pro
ဒါလေးကတော့ သုံးဖူးသူတိုင်းသိပါလိမ့်မယ်..။ကွန်ပျူတာမှာ မလိုအပ်တဲ့ junk file တွေကိုရှင်းလင်းပေးတာ စက်ကိုလေးလံစေတဲ့ Malwere တွေကို ဖယ်ရှားပေးတာ registry တွေကို repair လုပ်ပေးနိုင်သလို ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရတာ ပေါ့ပါးသွက်လက်စေဖို့ RAM ကို released လုပ်ပေးတာအပါအ၀င် ကွန်ပျူတာမှာလိုအပ်ချက်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ software လေးဖြစ်တာမို့ ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူတိုင်း ဆောင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်..။mediafire ကနေတင်ပေးထားတာပါ..။ pro version လေးဖြစ်ဖို့ license key လေးပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်..။ဒီမှာယူပါ
IDM latest update version
6:03:00 PM software No comments
အမြဲတမ်း update ဖြစ်နေဖို့ Patch ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူ့ကိုသွင်းပြီးသွားရင် ထုံးစံအတိုင်းကီးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်.။ ပြသနာမရှိပါဘူး သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။
ပြီရင် patch ဖိုင်လေးကို run လိုက်ပါ..။လိုချင်ရင် ဒီမှာယူပါ
patch အသုံးပြုပုံကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ..။
6:02:00 PM software No comments
windows 8 အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်တွေ ဆောင်ထားရမဲ့ ဟာလေးပါ..။ အချို့ Activator တွေဟာ
windows ကတော့ Activation ဖြစ်ပါရဲ့ Lock screen ပြောင်းမရတာ Start screen ပြောင်းမရတာ account picture ပြောင်းမရတာ windows update ကို ပိတ်ထားရတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ..။
ဒီ Activator လေးကတော့ အဲဒီလိုပြသနာတွေ ကို အဆင်ပြေအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်..။
အသုံးပြုရတာကလည်း အင်မတန်လွယ်ပါတယ်..။ဒေါင်းလို့ရတဲ့ ဖိုင်လေးကို Double click ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။
ကွန်ပျူတာက Restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်..ပြန်တတ်လာရင် ပေါ်လာတဲ့ windows box လေးတွေမှာ ok လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ...။ လိုအပ်ရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ်..။
5:09:00 AM software No comments
ကိုယ့် ကွန်ပျူတာထဲက file တွေ folder တွေ drives တွေကို သူများတွေမကြည့်စေချင်ရင် ဒီ Folder lock လေးသုံးပြီး lock ချထားလိုက်ပါ..။သုံးရတာလည်း အင်မတန်လွယ်ကူပြီး အလန်းလေးတွေကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ် ထင်ပါတယ်..။
5:46:00 PM windows No comments
windows7အခွေ လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ပါ..။
လိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။32 bits အတွက်ရော 64bits အတွက်ရော နှစ်မျိုးလုံးပါ။
မိမိနှစ်သက်ရာကို ရွေးပြီး အောက်မှာယူလိုက်ပါ..။
အဆင်မပြေတာ ရှိခဲ့ရင် စာရေးထားခဲ့ပါ..။
32bits အတွက်က ဒီမှာ ယူပါ..။
64bits အတွက်က ဒီမှာ ယူပါ..။
Nero 12 Multimedia Suite Platinum 2013 full versio...